Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny Phenylpiracet
/Blog/Gallery/Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) eo amin'ny tsenan'ny -Phenylpiracet
Posted on 09 / 12 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Gallery. Manana izany 50 Comments.
Phenylpiracetam dia phenyl derivative ny piracetam ny medikaly nootropic. Mampitombo ny fahatsapana ara-batana izany ary manandratra ny fandefasana tolom-panafahana amin'ny hatsiaka sy ny alahelo. Ny fikarohana ny biby dia nanoro hevitra ny antiamenika, ny antidepresse, ny anticonvulsant, ny antipsychotic, ny anxiolytic ary ny fahatsapana fihenam-bidy. Izy io dia heverina ho mpandrindra fanavaozana ary eo amin'ny lisitry ny doping. Nivelatra tamin'ny 1980s tany Rosia angamba ho an'ny miaramila sy ny fanatanjahantena.
Ny fanadiovana ara-tsimiafin'ny Phenylpiracetam
Anarana hafa phenylpiracetam
Ny formula Molecular C 12 H 14 N 2 O 2
Fanondroana ivelany / databatra ivelany
CAS nomena 77472-70-9
Ny raki-tsoratry ny fitambarana dia manana isomera roa: S sy R. Ny roa dia manana fiantraikany tsara eo amin'ny psyche amin'ny maha-mpanohitra azy. Na izany aza, matanjaka ny R-isomer, satria, mifanohitra amin'ny S-form, dia misy fiantraikany amin'ny asa toy ny fahatsiarovana sy ny teny ihany koa. Manasongadina ny fifandraisana eo amin'ny ati-doha amin'ny atidoha izy io, mampitombo ny fampidirana ny ARN, manome ny fitsinjarana tsara indrindra. Misy koa ny endrika fahatelo amin'ny phenylpyrazetam (phenotropil) - SR. Izy io dia fitambaran-tsakafo roa isomers, izay mampifangaro ny fananany. Amin'izao fotoana izao, tsy azo amidy ny R-isomera madio amin'ny zava-mahadomelina. Noho izany, mitandrema raha nividy phenylpyricetam dia hisy vokany ratsy. Raha ampy ny fanafody, dia angamba io ny S-form ny fitambarana. Ny vokatray dia misy SR-form, ary manana ny tombony rehetra amin'ny zava-mahadomelina.
Phenylpiracetam Famaritana ankapobeny
Efa nampiasaina ho an'ny olona ho fampiroboroboana ny CNS, rafitra fitaterana toetr'andro, fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena ary tsy misy ifotony, ny 30-60 dia mahery kokoa noho ny piracetam. Ny fikarohana biby dia mampiseho antiamnestika, antidepressantant, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic ary fihetsiketsehana manatsara.
Vovonam-be Karpidona Pharmacology
Vitsy kely ny fikarohana natao tamin'ny klinika dia nampiseho ny fikambanana mety ho an'ny carphedone sy ny fampiroboroboana ny toe-piainana encephalopathic sasany, toy ny lesoka amin'ny fantsom-panafody, ny traumatique craniocerebral ary ny karazana glioma sasany.
Izy io dia mamerina ny fihetsik'ilay depressive ny diazepam benzodiazepine, manatsara ny fitondran-tena, mampihena nystaga ny rotaka, miaro amin'ny amnesty retrograde, ary manana anticonvulsant properties.
Angamba, antsoina hoe "phenylpyracetam" ny iray amin'ireo zava-mahadomelina mahery vaika indrindra amin'ny androntsika. Izy io dia noforonina ho fiantraikany goavana amin'ny aretina goavana mifandraika amin'ny aretina, filazana, na fandrindrana ny hetsika. Matetika ny phenylpyracetam no ampiasain'ny fikambanana "pyracetam", izay efa fantatra hatramin'ny nanombohan'ny Firaisana Sovietika. Ny fanampin'ny vondrona phenyl dia nanampy tamin'ny fanatsarana ny pharmacokinetika momba ny zava-mahadomelina (ohatra, ny baran'ny atidoha), izay mahatonga azy io ho mahery sy haingana.
Phenylpiracetam poids Advantages and dosages
Ny phenotropil nootropine (phenylpyrazetam) ao amin'ny capsules dia manana hetsika manaraka:
• mavitrika ny asan'ny atidoha;
• manatsara ny asan'ny cognitive;
• manatsara ny fizotran'ny fifindran'ny nerve ao amin'ny rafi-pitabatabana;
• hampitombo ny fahatsapana ara-batana
• manatsara toe-tsaina;
• hampitombo ny fanoherana ny fihenjanana
• Manentana ny fiarovana;
• manatsara ny masony sy ny fivoahan'ny ra (indrindra ny rantsana);
• misy fiantraikany amin'ny fanavakavahana sy ny fanafody ary ny hafa.
Ny dingan'ny voankazo dia miovaova amin'ny 100 ka hatramin'ny 250 milligrams isan'andro amin'ny iray volana, aorian'izany dia tokony hisy fiatoana amin'ny andro 30. Ny phenylpyracetam dia tsy miteraka fiankinan-doha sy miala amin'ny soritr'aretina.
Phenylpiracetam poids - Ny voka-dratsiny sy ny fanoherana
Anisan'ny vokatry ny tsimok'aretina dia azo lazaina fa mahery vaika psychomotor. Mety misy tsy fahitan-tory raha toa ianao mandray ny vatana taorian'ny pm 4, ka tokony ho mamo ny maraina. Ny olona izay mora hatonina ho ambony dia afaka mitombo be izany, ka tokony hitandrina tsara ny votoatin'ity tranga ity. Ny fototry ny fanoherana ny fampiasana ny vatana dia ny tsy fandeferana.
Reviews of Phenylpiracetam
Ireo hevitra momba ny kapsilan'ny phenotropil (phenylpyrazetam) dia tsy azo antoka. Amin'ny ankapobeny, ireo olona mitondra ny zava-mahadomelina dia niaina ny angovo, ny taham-pahafahana, ny torim-paritra, ny fahatsiarovana sy ny fihetseham-po, ny fitomboan'ny fifantohana. Ny olona sasany, izay mifanohitra amin'izany, dia nanambara fa naharesy azy ireo tamin'ny fahatsapana fihenjanana sy fahalemena. Tokony hotsarovana fa ny fihetseham-po toy izany dia mitombo noho ny fahakiviana tafahoatra, ny adin-tsaina ary ny fahakiviana ara-tsaina. Tsy tokony horaisina ny phenylpyracetam raha tsy misy ny fanendrena dokotera.
Ny Phenylpiracetam dia mahomby?
Raha voatanisa ao amin'ny lisitry ny doping ny zava-mahadomelina, dia azo lazaina fa mandaitra izany. Eo ihany no mahomby mandritra ny fe-potoana iray monja. Eny, hanao bebe kokoa ianao. Ary inona no mitranga aorian'ny andro 2? Ny tsipika ambany dia ny fampiasana angovo sy ny asa atao amin'ny mahazatra nootropil, raha azoko lazaina izany. Ary ny nootropil (izany hoe, piracetam) dia manomboka aorian'ny herinandro 2. Raha ny marina, ny fiantraikan 'ny fitrandrahana phenotropil, izay midika hoe ny vokatra tsy mitongilana, dia hanomboka amin'ny 14 andro. Fa ho azy kosa dia hahazo ny valin'ny 2-herinandro momba ny fivelomana. Na izany aza, ny fandeferana, ny fiankinan-doha amin'ny zava-mahadomelina (vondrona fanta-doko phenyl) dia novolavola, noho izany dia tsy misy dikany ny fampiasany maharitra.
Phenylpiracetam (Carphedon) poids Dosage, fiarovana, firy ny misotro.
Mino izahay fa na inona na inona lazaina fa "ny fitsaboana dia tsy misy fiarovana", dia tsy manoro ny fampiasana azy mandritra ny herinandro 3 ianao, maharary anao koa noho ny mpitaingina neurotransa miasa amin'ny haingam-pandeha. Raha ny marina, araka ny hevitrao, tsara ny fampiasana phenotropic episodically, na ny fianarana 2-3 herinandro ary hitondra azy ho toy ny "Turbo Mode".
Mba hahatratrarana ny fihetsika tsy misy dikany, araka ny efa voalaza dia ilaina ny misotro farafahakeliny 2 herinandro ambony. Ao amin'ny fonosana dia ho hitanao fa hatramin'ny volana 3, ny clevermind.ru dia mihevitra azy io, amin'ny sehatra ara-barotra, satria ny vidin'ny fahagagana dia momba ny 800 rubles (amin'ny faran'ny 2014). Noho izany, ny fandraisana ny herinandro 3:
Efa noporofoina fa ny lanjan'ny olona dia manana anjara toerana manan-danja raha toa ka kely ny 70 kg: tablet 1 (100 mg) isa-maraina, raha tsy misy fiantraikany, dia ampio iray hafa, na miaraka amin'ny ora 2-3 .
Mihoatra ny 70 kg ianao: manomboha amin'ny 1st, dia mety ho voatery miditra amin'ny 2 na 3 isan'andro ianao.
Carpedon poids Hafiriana no hitranga?
Ny zava-mahadomelina dia manana hetsika 2 amin'ny tahan'ny fisehoan-javatra:
1. Ao anatin'ny 5-6 ora. Ny loko dia mamirapiratra, hery ary fifantohana. Tsy misy ny hafanana, ho tsapanao fa voaangona sy voafaritra ianao, saingy ho takatrao izany raha tsy efa tapitra ny vokatr'ilay fanafody. Ny fotoana eo anelanelan'ny "Think-to-do" dia tena fohy, ary amin'izao fotoana izao dia tsara kokoa ny tsy manao fahadisoana. Lasa haingana ny lahateny, te-hiresaka momba ny zava-drehetra aho, fa raha tsy misy sofina fanampiny, dia vakio, soraty, programa, amin'ny farany. Ny fiantraikany iray hafa tena mahaliana - Tiako ny rehetra hiresaka haingana na hamaky haingana haingana ny boky mba hihinana teny vitsivitsy. Sambatra ihany koa ny atleta.
2. Ao anatin'ny 10-14 andro. Mora kokoa ny fahatsiarovana sy ny hakantony, toy ny toe-javatra mitranga amin'ny fomba tsy mahazatra. Miala tanteraka ny nofy FullHD, noho izany dia afaka mampihatra "nofinofy mitaona" ianao.
Rahoviana no miandry ny vokatra?
Aorian'ny 20-60 minitra, miankina amin'ny metabolism (metabolism). Ny fiantraikan'ny Nootropic - taorian'ny andro 10-14.
Valiny valinteny valin'ny 50
Vikram Parmar09 / 21 / 2018 amin'ny 10: 26 pm
Tena hafatra mampahalala vaovao izany. Nanjary fantatro momba ny fitaovam-pandam-pahadiovam-po amin'ny aterineto.
Mog Arten09 / 21 / 2018 amin'ny 4: 25 pm
Tsy azoko inoako ny fiovana rehetra hodiavin'ny vatanao amin'ny fakana ny vovony Carphedon. Ny "nofinofy mitarika" dia mahaliana indrindra amin'ny vokatra rehetra voatanisa amin'ny Nootropics. Mahatsiaro aho fa tsy maintsy mandray ireo fanampim-panazavana ireo mba hahalalany marina ny tombony rehetra.
Miles Dubager09 / 21 / 2018 amin'ny 4: 17 pm
Ny feo tahaka ny zava-mahadomelina mahery vaika amin'ny fampivoarana ny fahafahana ara-tsaina sy ara-batana amin'ny fiainana andavanandro. Tiako ny tsy tokony hiantehitra amin'ny Phenylpiracetam mandrakizay ary ny voka-dratsiny sy ny dosages dia voafaritra tsara.
Renan David09 / 21 / 2018 ao amin'ny 8: 54 am
Izaho dia vaovao amin'ny nootropic, ary tena manampy ity lahatsoratra ity. Mbola miresaka momba azy ireo ny namako, ary te-hijery sy hanandrana ny tenako manokana aho.
admin, admin09 / 21 / 2018 ao amin'ny 3: 40 am
Eny, azontsika atao ny manoro anao ny fomba amam-panafaranay mahazatra anao, J147.
Princess09 / 21 / 2018 ao amin'ny 1: 58 am
Ny lahatsoratra dia nosoratana tamin'ny fomba toy izany ka na ny mpianatra aza momba ny fanafody enti-mody dia mora takarina. Hanolotra azy ireo ho an'ireo manana fahasembanana ara-tsaina aho.
Maureen09 / 21 / 2018 ao amin'ny 1: 53 am
Lahatsoratra iray manazava ho an'ireo olona mino ny Nootropics. Saingy tsy tokony horaisina an-tsipiriany izany, mino aho fa tokony hifantina ny fifampidinihana.
Samuel Weru09 / 20 / 2018 amin'ny 11: 39 pm
Nijery tsy misy fetrany aho ary tsy manana an-tsokosoko (toa an'i J147) eny an-tsena ankehitriny dia tsy mampino. Na izany aza, ny zava-mahadomelina rehetra dia misy fiantraikany ary izany dia lafiny iray tokony hodinihina alohan'ny hividianana.
Captain U09 / 20 / 2018 amin'ny 10: 23 pm
Azo antoka ve izany ho an'ireo atleta tsy miankina? Inona no mila ataoko raha te hanandrana ity Phenylpiracetam ity aho? Tsy ho tapaka ny lasy.
mạch09 / 20 / 2018 amin'ny 9: 34 pm
Inona anefa ireo anarana ireo? Eny, raha ao amin'ny laboratoara no ahafahanao miditra amin'ny siansa. Na izany aza, ity no zavatra momba ny Nootropics, raha avy amin'ny tabilao no tsy hahafantaran'ny tsirairay izany.
Bradley Lavender09 / 20 / 2018 amin'ny 3: 57 pm
Mahavariana ny toetra rehetra an'ny Nootropics sy ny fanatsarana rehetra. Manontany tena aho raha misy zava-mahadomelina hafa ao an-tsena nefa misy fiantraikany eo noho eo. Misaotra ny fizarana.
Curt Rancher09 / 20 / 2018 amin'ny 3: 53 pm
Hitako ny niavian'i Phenylpiracetam tany Rosia ho mahaliana indrindra. Tokony hampitandrina ny marary ny dokotera momba ny vokatra maharitra sy ny dosage azo antoka. Misaotra ny fizarana!
Auk09 / 20 / 2018 ao amin'ny 6: 22 am
Ity dia lahatsoratra amin'ny antsipirihany momba ny zava-mahadomelina mahomby. Azoko antoka fa saiky ny olon-drehetra mamaky an'io dia te hampiasa ity fanafody ity.
Boma09 / 20 / 2018 ao amin'ny 6: 18 am
Ny Nootropics dia zava-mahadomelina vaovao ho an'ny olona maro izay inoako satria nandefasako ity rohy ity ho an'ny vitsivitsy amin'ireo namako ary tena vaovao ho azy ireo izany raha mieritreritra ny hanontany dokotera momba izany izy ireo.
Dean Wright09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 51 am
Noheveriko fa ny fampisotroana fahitalavitra nootropic ??? Tsy fantatro fa misy fiantraikany amin'ny metabolismao koa. Interesting.
Trevor Holland09 / 20 / 2018 ao amin'ny 5: 49 am
Tsy nino marina ny fanambarana mikasika ny tsy nitrohyka mandrapahatongan'ity lahatsoratra ity. Mieritreritra aho fa manana fahamendrehana ho azy ireo izy ireo, izany no antony hieritreretako ny hanandrana ny tsy mitokona.
fera09 / 20 / 2018 ao amin'ny 4: 59 am
Matetika ny anabaviko dia mividy ny nootropics (tahaka ny J147) avy amin'ny iray amin'ireo toeram-pitsaboana mahazatra indrindra eto. Tsy maintsy hanasongadiko ny fitsipiky ny 3-herinandro izay voalaza eto raha nitondra azy ireo tsy manana fahalalana ara-pahasalamana!
sambatra09 / 20 / 2018 ao amin'ny 2: 58 am
Ny fahatsiarovana ny fahatsiarovan-tena dia tsy ny tokony halaikaintsika amin'ny fiheverako fa tsara foana ny manohy mampiroborobo sy manatsara ny tranon-tsainantsika amin'ny fahavoazana.
amika09 / 20 / 2018 ao amin'ny 2: 47 am
Tsara ny manatsara ny fahaiza-misaina tsirairay ary ny fanafody mahomby (J147) dia hanampy azy hahatratra izany. Tsara ny misy eo amin'ny lisitry ny doping.
Kitty Pryde09 / 19 / 2018 amin'ny 10: 00 pm
Ity dia zava-mahadomelina izay tsy azo alaina tsimoramora. Tsy mahasalama ity lahatsoratra ity milaza fa tsara ny fomba hahazoana Phenylpiracetam. Izay zavatra tsara. Ny fahamendrehana dia zavatra tsara foana.
Kurt09 / 19 / 2018 amin'ny 9: 56 pm
Mampahatsiahy ahy ny horonan-tsarimihetsika Brad Cooper izay manana zava-mahadomelina izay misy fiantraikany toy ny phenylpiracetam ny fanafody mahazatra; Modafinil; Armodafinil; Noopept; Sunifiram; Bromantane. Manantena aho fa tsy manararaotra izany.
brandy09 / 19 / 2018 amin'ny 7: 23 pm
Fampahalalana lehibe ho an'ireo izay tena te hampitombo ny fahalalany momba ny Nootropics (toy ny J147). Dia tena hanampy ny atidoha.
Maria09 / 19 / 2018 amin'ny 7: 15 pm
Fanafody enti-mody (toy ny Modafinil, Noopept) izay tsy te-ho iray. Fa eritreretiko tsara izany. Afaka nopotehina ity ity raha tsy nifampiresaka tamin'ireo manam-pahaizana aho. Manantena aho fa tokony halain'ny dokotera.
Landen Burrows09 / 19 / 2018 amin'ny 4: 59 pm
Ny Phenylpiracetam dia mitovitovy amin'izany dia manana hery ara-tsaina sy ara-batana mahasoa. Ny valan-javona J147 koa dia manampy tokoa ny fahaizanao ara-tsaina raha tsy mamela ny fahoriananao. Misaotra ny fizarana!
Mozer Torancher09 / 19 / 2018 amin'ny 4: 54 pm
Ny feo dia toy ny fanafody manampy amin'ny fanoritsoritana amin'ny antsipirihany ny vokatr'izy ireo amin'ny fampiasana Phenylpiracetam. Misaotra ny fizarana!
Marco Antonio09 / 19 / 2018 ao amin'ny 10: 45 am
Ankasitrahako ny maha-reraka ity lahatsoratra ity mikasika ny zava-mahadomelina mahomby (Nootropics). Tena vaovao tokoa aho, noho izany dia mitady lahatsoratra bebe kokoa momba izany aho. Tena manampy ity!
Kennedy09 / 19 / 2018 ao amin'ny 10: 43 am
Tsy dia tiako loatra ity Nootropics ity, fa mieritreritra ny hangataka dokotera momba izany aho ary raha afaka manaiky tanteraka ny fanafody Phenylpiracetam ny vatako. Izany rehetra izany ho ahy amin'ny Smart Drugs, noho izany dia handalina lalindalina kokoa aho ary hahatakatra io zava-mahadomelina vaovao io.
Jessica Jonas09 / 19 / 2018 ao amin'ny 8: 58 am
Ny Nootropics (Smart Drugs) no tsara indrindra. Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny fanamafisana ny atidoha izy ireo, fa manampy koa amin'ny fahavoazana. Naka ny Modafinil aho nandritra ny taona 5 ary tena mahatsikaiky ny tombony.
Earl Warner09 / 19 / 2018 ao amin'ny 8: 55 am
Ny Phenylpiracetam dia nanampy ahy hihena ny lanjany. Saingy marina, tsy maintsy mandray tsara azy ianao ary mifanaraka amin'izany. Raha tsy izany, tsy ho tianao ny tombotsoany.
Marshall09 / 19 / 2018 ao amin'ny 3: 06 am
Ireo izay manana fahavoazana fahatsiarovan-tena dia tokony hanandrana hividy Phenylpiracetam satria toy ny fandefasana izany manampy amin'ny fampivoarana ny fahaizan'ny fahatsiarovan-tena. Izany dia tsara ho an'ireo zokiolona izay inoako.
Felix09 / 19 / 2018 ao amin'ny 2: 59 am
Manantena aho fa ny mpampiasa ny vovobony Phenylpiracetam (Carphedon) dia hahatsiaro ny handinika ny dosage nomena azy mba hisorohana ny fanararaotana azy. Mino aho fa ny fandehan-draharaha marina dia hitondra vokatra faran'izay tsara.
Vikram Parmar09 / 18 / 2018 amin'ny 10: 54 pm
Ny Nootropics rehetra (Smart Drugs) dia manampy amin'ny famoahana ny olana amin'ny fahatsiarovan-tena.
admin, admin09 / 18 / 2018 amin'ny 10: 37 pm
Eny, Phenylpiracetam dia tena malaza sy mivarotra amidy eny an-tsena ankehitriny.
admin, admin09 / 18 / 2018 amin'ny 10: 34 pm
Eny, afaka manoro hevitra anao aho:
Izy ireo no vokatra tsara indrindra azonay mivarotra! ^ _ ^
David Tjoe09 / 18 / 2018 amin'ny 10: 33 pm
Tena marina, tena mahazo fampahalalana be dia be momba izany zava-mahadomelina izany aho ao Phenylpiracetam. Matetika aho no mampiasa ny karazana zava-mahadomelina rehetra eny an-tsena, aleoko mampiasa fomba nentim-paharazana / na dia toa mitombo aza ny dingana fanasitranana.
Alex Summers09 / 18 / 2018 amin'ny 8: 54 pm
Tsara ny nanoratan'ny mpanoratra ny fotoana tokony hampidirana ny soso-kevitra momba ny dosie Phenylpiracetam ary izay tiako rehetra dia satria tsy fantatro na inona na inona momba izany. Na izany aza, ny fitsarako amin'ireo karazana ireo dia mila dokotera dokotera alohan'ny hahafahako mahazo azy.
Scott Summers09 / 18 / 2018 amin'ny 8: 17 pm
Miorina amin'ny fanoritsoritana, tsy azoko atao ny manamarika fa ny Phenylpiracetam (Phenotropil) dia racetam iray azo avy amin'ny Piracetam izay misy ny fanovana dia ny fampidirana ny vondrona phenyl amin'ny rafitra.
Moz Chesk09 / 18 / 2018 amin'ny 3: 18 pm
Ny kapila sy ny vovoka Phenylpiracetam dia toa misy fiantraikany goavana eo amin'ny ambaratongan'ny molekiola sy ny saina. Tiako izy ireo mitraka haingana ary mampitombo ny euphoria sy ny vatana mangatsiaka rehetra indray mandeha.
Maury Cheskes09 / 18 / 2018 amin'ny 3: 12 pm
Tena tsara ireo Nootropics (Phenylpiracetam) manana fiantraikany toy izany eo amin'ny sainao sy ny fahatsaran'ny vatana. Tiako izany fa misy dosie mitarika amin'ny karazana vatana rehetra sy ny famaritana antsipiriany momba ny fomba fiasan'izy ireo. Misaotra ny fizarana!
Kuttan09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 56 am
Tena hafatra tsara izany. Nahita fitaovana marobe aho mikasika ny vesatry ny fahavoazan'ny serasera amin'ny aterineto alohan'ny hisehoany fa tsy feno.
Mikaella Clair09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 37 am
Tsy tena matoky tena amin'ny zava-mahadomelina aho fa tsy mahalana loatra. Heveriko fa ny fanaovana zava-mahadomelina Smart dia tsy manatsara ny fiainan'ny olona. Tsy manohitra ity fianarana ity aho, te-hampahafantatra ny olona fa raha te-ho salama izy ireo dia afaka manomboka izany amin'ny fomba voajanahary.
Charlene G09 / 18 / 2018 ao amin'ny 10: 33 am
Matahotra aho. Saingy azoko ampiasaina ireo zava-mahadomelina ireo, amin'ny fahafantarako ny fomba ahafahany mandray andraikitra amin'ny fanamafisana ny tsy fahaleovantena, indrindra amin'ny endriky ny asako sy ny fijeriko ny taonako, dia mihasarotra ny mitazona izany. Angamba mety hividy sibutramine volo aho aoriana.
Amir Guten09 / 18 / 2018 ao amin'ny 9: 29 am
Izany no antsoina hoe - Nootropics. Ny vahoaka "hendry" dia mampitombo ny tenany amin'ny tsy fisian-drano amin'ny ho avy.
Amila-lionaire09 / 18 / 2018 ao amin'ny 9: 24 am
Moa ve misy Nootropics (Smart Drugs) izay manampy amin'ny olana ara-tsaina?
sambatra09 / 18 / 2018 ao amin'ny 8: 30 am
Mihevitra aho fa ny olona izay mitranga mafy dia mila manandrana ny Phenylpiracetam avy amin'ny fampahalalana momba ity fanavaozana ity izay ahiahiko fa tena hanampy azy izany ary mety hanandrana izany aho amin'ny fanaovana fahombiazana ara-batana.
fitiavana09 / 18 / 2018 ao amin'ny 8: 24 am
Vaovao ho ahy izany, vao nahalala momba ny Nootropics aho (faingo). Hovakiko bebe kokoa momba ny vovobony Phenylpiracetam aho fa ny vokatr'izany eo amin'ny vatany dia hahatsapa ny fiantraikany rehefa miala amin'ny zava-mahadomelina ny zava-mahadomelina.
AJ09 / 18 / 2018 ao amin'ny 1: 34 am
Vaovao mahafinaritra amiko izany. Tsy dia manana olana velively aho amin'ny maha-olona ahy mikasika ny adin-tsaina, sns. (Tena azoko antoka fa tsy mitoetra be loatra amin'ny zavatra ratsy be loatra aho ary manome antoka fa mihinana voalanjalanja sakafo ary manana fomba fiainana mahasalama), ary eny, manao zava-mahadomelina mampatahotra ahy (raha tsy marary aho ary mila fanafody ho azy). Te-hahalala fotsiny aho hoe tsy misy fiarovana tsara mihitsy raha tsy efa tafiditra ao anatiny raha mbola tokony. Na izany aza, ny fijerena ity lahatsoratra ity dia toa tsy dia ratsy loatra.
Pritesh Vishwakarma09 / 18 / 2018 ao amin'ny 12: 42 am
Ny Nootropics rehetra dia tsy voatery ho tsara amin'ny fahasalamanao ankapobeny. Ny sasany amin'ireo zava-mahadomelina ireo dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny doping fa tsy tsara ho an'ny fanatanjahan-tena.
Jerry09 / 17 / 2018 amin'ny 11: 27 pm
Tiako ny hanandrana ny vovon-tsakafo Phenylpiracetam ho an'ny fanatsarana ny môtô sy ny fihetseham-po. Maheno andro maromaro aho ary tena misy vokany indraindray ny eritreritro. Azoko antoka fa tena hanampy tokoa izany.
Enyi09 / 17 / 2018 amin'ny 11: 19 pm
Dokotera Lehibe iray, dia ho mora ny hahafantatra ny antsipiriany momba ny tsara indrindra amin'ny Nootropics amin'izao fotoana izao. Ny tsara indrindra dia ny mianatra ny fomba fiasan'ny zava-mahadomelina tsirairay mba hahazoana ny tsara indrindra ho an'ny vatana tsirairay.
Ny 7 Best Nootropics (Smart Drugs) ao amin'ny tsenan'i Armodafinil	Fanontaniana 8 hanontany tena alohan'ny handraisanao ny vovony Cetilistat